Ma W’ani Nnye Adwumaden Ho​—Kɔ Akwansini Mmienu
KENKAN WƆ Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bislama Bulgarian Cakchiquel (Central) Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hmong (White) Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Mam Mambwe-Lungu Maya Mazatec (Huautla) Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngabere Norwegian Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Runyankore Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tlapanec Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Vietnamese Wallisian Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
“Onipa biara bɛdidi na wanom na wahunu adepa, ne brɛ nyinaa mu. Onyankopɔn akyɛdeɛ ne no.” (Ɔsɛnkafoɔ 3:13) Onyankopɔn pɛ sɛ yɛn ani gye wɔ adwuma a yɛyɛ mu, enti wonnye nni sɛ ɔbɛkyerɛ yɛn nea yɛyɛ a ɛbɛma yɛanya saa anigyeɛ no? (Yesaia 48:17) Ɔnam n’Asɛm Bible so akyerɛ yɛn nea ɛsɛ sɛ yɛyɛ na ama yɛanya akomatɔyam wɔ nnwuma a yɛyɛ mu. Momma yɛnsusu emu bi ho nhwɛ.
NYA ADWUMA HO ADWEMPA
Nnwuma bi wɔ hɔ a ɛgye adwene paa. Ebi nso wɔ hɔ a ɛgye ahoɔden, na ebi nso yɛ hɔ-ne-hɔ. Ne nyinaa mu no, hu sɛ “ɔbrɛ biara mu wɔ mfasoɔ.” (Mmebusɛm 14:23) Mfasoɔ bɛn? Ebi ne sɛ, yɛyɛ adwuma a, ɛma yɛtumi hwɛ yɛn ho. Onyankopɔn ahyɛ bɔ sɛ ɔbɛma wɔn a wɔyi wɔn yam som no no nsa aka nea wɔhia. (Mateo 6:31, 32) Nanso, ɔhwɛ kwan sɛ yɛn nso yɛbɛyɛ yɛn fam deɛ; ɛne sɛ yɛbɛyɛ adwuma pa na ama yɛanya nea yɛhia.—2 Tesalonikafoɔ 3:10.
Sɛ yɛn nsa bɛtumi aka nea yɛhia a, gye sɛ yɛyɛ adwuma. Adwuma nso boa ma yɛtumi yɛ yɛn asɛdeɛ. Joshua adi mfeɛ 25. Ɔkaa sɛ, “Wotumi hwɛ wo ho a, ɛma w’ani gye. Sɛ wotumi totɔ nneɛma a wohia a, ɛnneɛ na adwuma a woreyɛ no so wɔ mfasoɔ.”
Afei nso, sɛ woyere wo ho yɛ adwuma a, ɛma w’ani gye. Ɛwom, adwumayɛ nna fam, nanso sɛ yɛyere yɛn ho yɛ adwuma na ɛyɛ den sɛ dɛn mpo a, yɛbɛtumi anya akomatɔyam ɛfiri sɛ yɛnim sɛ yɛabɔ yɛn ho mmɔden, na yɛnyɛ akwadworɔ. (Mmebusɛm 26:14) Sɛ ɛba saa a, yɛnya akomatɔyam. Aaron a yɛkaa ne ho asɛm wɔ Ɔwɛn-Aban yi mfitiaseɛ no kaa sɛ, “Sɛ meyɛ adwuma da mu no nyinaa na mete nka sɛ mabrɛ, na afoforɔ anhu nea meyɛe no mpo a, me koma tɔ me yam.”
YERE WO HO YƐ ADWUMA
Bible kamfo obi a ne ho “akokwa n’adwuma mu” ne nea “ɔde ne nsa yɛ adwuma anigyeɛ so” no paa. (Mmebusɛm 22:29; 31:13) Ɛgye berɛ ansa na obi ho akokwa wɔ biribi mu. Nnipa kakraa bi na sɛ wɔn ho nkokwaeɛ wɔ adwuma bi mu a, wɔde anigyeɛ yɛ. Ebia ɛno nti na nnipa pii ani nnye wɔn adwuma ho no; wɔnkɔ so ara nnyɛ na ama wɔn ho akokwa.
Adwuma biara nni hɔ a sɛ obi nya ho adwempa a ɔrentumi nyɛ. Nea ɛhia ara ne sɛ ɔbɛsua no yie. William adi mfeɛ 24, na ɔkaa sɛ: “Sɛ woyere wo ho yɛ adwuma bi na wohunu nea afiri mu aba a, ɛma w’akoma tɔ wo yam paa. Nanso sɛ wofa kwatikwan bi so, anaa woyɛ adwuma no bi-ne-bi a, worennya saa akomatɔyam no da.”
FA W’ADWENE SI MFASOƆ A AFOFORƆ BƐNYA WƆ W’ADWUMA SO NO SO
Sɛ woreyɛ adwuma a, ɛnyɛ sika a wobɛnya afiri mu no nko ara na ɛsɛ sɛ wodwene ho. Mmom bisa wo ho sɛ: ‘Dɛn koraa nti na mereyɛ adwuma yi? Sɛ manyɛ a, dɛn na ɛbɛba? Na sɛ meyɛ na manyɛ no yie nso ɛ? Mfasoɔ bɛn na afoforɔ nya firi adwuma a meyɛ no so?’
Ɛsɛ sɛ wogye berɛ susu asɛmmisa a ɛtwa toɔ no ho ɛfiri sɛ, sɛ woyɛ adwuma na sɛ wohunu sɛ afoforɔ nya so mfasoɔ a, ɛma w’akoma tɔ wo yam paa. Yesu kaa sɛ: “Ɔma mu wɔ anigyeɛ pii sene ɔgyeɛ.” (Asomafoɔ Nnwuma 20:35) Sɛ yɛyere yɛn ho yɛ adwuma a, ɛnyɛ wɔn a yɛne wɔn di dwa ne yɛn adwumawuranom nko ara na wɔnya so mfasoɔ. Nnipa afoforɔ nso nya so mfasoɔ. Wɔn mu binom ne yɛn mmusua ne wɔn a adeɛ ahia wɔn.
Yɛn Mmusua. Sɛ abusua ti yere ne ho yɛ adwuma a, anyɛ hwee koraa no, n’abusua nya mfasoɔ mmienu wɔ so. Baako ne sɛ, ɔma wɔnya nea wɔhia te sɛ aduane, ntadeɛ, ne baabi a wɔbɛda. Ɛno kyerɛ sɛ adwuma a Onyankopɔn de ahyɛ ne nsa sɛ “ɔnhwɛ ɔno ara ne nnipa” no, ɔyɛ no yie. (1 Timoteo 5:8) Nea ɛtɔ so mmienu, sɛ abusua ti yere ne ho yɛ adwuma a, ɛma n’abusua hu mfasoɔ a ɛwɔ adwumayɛ so. Ɔwɛn-Aban yi mu asɛm a ɛdi kan no mu no, yɛkaa Shane ho asɛm. Ɔkaa sɛ: “Me papa yɛ obi a ɔmfa n’adwuma nni agorɔ, enti wayɛ nhwɛsoɔ ama me. Ɔde mfeɛ pii ayɛ kapenta adwuma, na ɔdi nokorɛ wɔ n’adwuma ho paa. Me papa ama mahunu sɛ mfasoɔ wɔ so sɛ mede me nsa bɛyɛ adwuma ama afoforɔ anya so mfasoɔ.”
Wɔn a adeɛ ahia wɔn. Ɔsomafoɔ Paulo tuu Kristofoɔ fo sɛ ‘wɔnyɛ adwumaden na ama wɔanya biribi a wɔde bɛma deɛ adeɛ ahia no.’ (Efesofoɔ 4:28) Nokwasɛm ni, sɛ yɛyere yɛn ho yɛ adwuma hwɛ yɛn ho ne yɛn mmusua a, yɛbɛtumi aboa wɔn a biribi ahia wɔn no nso. (Mmebusɛm 3:27) Enti sɛ yɛyere yɛn ho yɛ adwuma ma afoforɔ nya so mfasoɔ a, yɛn ani bɛgye paa.
KƆ AKWANSINI MMIENU
Yesu Bepɔ so Asɛnka a agye din no mu no, ɔkaa sɛ: “Sɛ obi a ɔwɔ tumi hyɛ wo sɛ monkɔ kwansini baako a, wo ne no nkɔ akwansini mmienu.” (Mateo 5:41) Saa asɛm yi bɛboa wo sɛn wɔ w’adwuma mu? Sɛ wɔde adwuma hyɛ wo nsa a, bɔ mmɔden sɛ wobɛyɛ aboro nea wɔde ama wo no so. Fa botaeɛ bi si w’ani so na yere wo ho yɛ adwuma no yie. Afei nso, yɛ no ntɛm na bɔ mmɔden fa ɛho mmara nyinaa yɛ adwuma.
Sɛ woreyɛ adwuma na woyi wo yam yɛ no yie a, ɛbɛtumi ama w’ani agye. Adɛn nti na yɛreka saa? Ɛfiri sɛ wofiri wo komam na ɛyɛeɛ; obiara anhyɛ wo. (Filemon 14) Wei ma yɛkae asɛm a ɛwɔ Mmebusɛm 12:24 no. Ɛhɔ ka sɛ: “Nsiyɛfoɔ nsa na ɛbɛdi tumi, na ɔkwadwofoɔ nsa deɛ, ɛbɛyɛ nkoadwuma.” Yɛn mu pii wɔ hɔ a wɔrenhyɛ yɛn mma yɛnyɛ nkoadwuma. Nanso, sɛ obi yɛ akwadwodwuma a, ɛma ɔte nka sɛ ɔyɛ akoa a berɛ nyinaa nkurɔfoɔ hyɛ no so. Sɛ obi yi ne yam yɛ adwuma boro nea wɔde ama no no so a, ɛma ɔte nka sɛ ɔde ne ho, na obiara nhyɛ no so.
MMA ADWUMA NNYE W’ADWENE
Ɛho hia sɛ yɛyere yɛn ho yɛ adwuma, nanso ɛsɛ sɛ yɛkae sɛ ɛnyɛ adwuma nko ara nti na yɛwɔ wiase. Ɛwom, Bible hyɛ yɛn nkuran sɛ yɛnyere yɛn ho nyɛ adwuma. (Mmebusɛm 13:4) Nanso, ɛnka sɛ yɛnkum yɛn ho nyɛ adwuma. Ɔsɛnkafoɔ 4:6 ka sɛ: “Ɔhome nsa mã yɛ sene ɔbrɛ ne adehunu nsa mã mmienu akyiridie.” Wei kyerɛ sɛn? Sɛ obi ma adwuma gye ne berɛ ne n’ahoɔden nyinaa a ɔrennya mfasoɔ biara mfiri so. Sɛ ɛba saa a, na ɛkyerɛ sɛ wabrɛ agu; ɛte sɛ nea ɔreboro mframa.
Bible bɛtumi aboa yɛn ama yɛanya adwuma ho adwempa. Ɛwom sɛ Bible hyɛ yɛn nkuran sɛ yɛnyɛ adwuma deɛ, nanso ɛsan tu yɛn fo sɛ ‘yɛmpɛɛpɛɛ mu nhunu nneɛma a ɛhia koraa no.’ (Filipifoɔ 1:10) Dɛn ne nneɛma a ɛhia koraa no? Ebi ne sɛ yɛbɛnya berɛ ama yɛn mmusua ne yɛn nnamfonom. Nanso nea ɛhia paa ne nneɛma a ɛfa Onyankopɔn som ho te sɛ Bible a yɛbɛkenkan na yɛadwendwene ho.
Sɛ obi toto biribiara pɛpɛɛpɛ wɔ n’asetena mu a, ɛbɛtumi ama n’ani agye n’adwuma ho yie. Nhwɛsoɔ bi ni. William a yɛaka ne ho asɛm dada no kaa sɛ, “Ná m’adwumawura yɛ obi a ɔtumi toto nneɛma yie. Ɔmfa n’adwuma nni agorɔ, na esiane sɛ n’adwuma ho twa nti, na wɔn a ɔyɛ adwuma ma wɔn no ne ne ntam yɛ papa. Sɛ ɔwie adwuma a ɛsɛ sɛ ɔyɛ no da no mu a, ɔpɔn kɔ fie kɔhwɛ n’abusua, na afei ɔde n’adwene si ne som so. Nanso wonim, n’ani gye sene obiara!”
Sɛnea Wɔhunu Adwumaden
“Sɛ ɛduru anwummerɛ na mabrɛ mpo, na mete nka sɛ matumi ayɛ biribi a, ɛma m’ani gye, ɛfiri sɛ mehunu sɛ mayɛ adwuma paa.”—Nick.
“Adwuma deɛ, ɛno ara ne sɛ wobɛyere wo ho ayɛ. Sɛ afoforɔ bɛtumi anya w’adwuma so mfasoɔ a, gye sɛ woyɛ no yie.”—Christian.
“Yɛn nipadua tumi yɛ nneɛma a ɛyɛ nwanwa. Nkwa yɛ akyɛdeɛ, na mepɛ sɛ meyere me ho yɛ adwuma na afei meboa afoforɔ de kyerɛ sɛ m’ani sɔ nkwa a mewɔ no.”—David.